Tsapan'i Kroasia ny maha-zava-dehibe ny mpitsidika vahiny satria lasa tsy misy mihitsy ny overtourism
Home » Toerana fitsangatsanganana » Tsapan'i Kroasia ny maha-zava-dehibe ny mpitsidika vahiny satria lasa tsy misy mihitsy ny overtourism
Kroasia niaina fiakarana tampoka teo amin'ny lazany tao anatin'ny roapolo taona lasa ary izao dia miankina betsaka amin'ny fitsidihana iraisampirenena hatrany amin'ny faratampon'ny fizahan-tany ankehitriny. Ny tanjaka lehibe iray ho an'i Kroasia dia nanjary nitotongana haingana ny harinkarenany satria ny areti-mandringana dia mamaritra ireo olana ara-drafitry ny toekarena miantehitra amin'ny fizahantany.
Pre-Covid-19 ny vinavina dia naneho ny taham-pisondrotana isan-taona (YOY) 6.4% amin'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena any Kroasia ho an'ny taona 2020. Tetikasa vinavina GlobalData dia nihena -32.2% YOY ny fihenan'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena tany Kroasia tamin'ny taona 2020, izay niteraka fiantraikany lehibe teo amin'ny fizahantany sehatra sy toekarena misimisy kokoa. "
Tao anatin'izay taona faramparany izay, toerana maro karazana any Kroasia no niaritra ny fitsidihan'ny fitsidihan-tany tafahoatra, foto-kevitra manome tombontsoa ara-toekarena marobe nefa matetika no hita fa ratsy noho ny fiatraikany ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana vokariny. Kroasia dia manana mponina 4.1 tapitrisa. Raha ny angon-drakitra indostrialy dia nandray mpitsidika iraisam-pirenena 17.4 tapitrisa ny firenena tamin'ny taona 2019, izay avo efatra heny noho ny isam-pireneny.
Kroaty marobe izay mety nahita ny fizahan-tany be dia be no maniry fatratra ny fiverenan'ny fizahantany avo. Ny fitomboan'ny fizotran'ny fizahan-tany dia hanomezana tombony ara-toekarena tena ilaina ny toeran'ireo fizahan-tany fizahan-tany toy ny fampitomboana ny asa sy fampitomboana avo lenta ny entana sy serivisy eo an-toerana.
Manomboka misokatra indray ireo trano fandraisam-bahiny amin'ny toerana izay malaza indrindra amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena. Adriatic Luxury Hotels (ALH) dia manomboka manokatra trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny sasany ao Dubrovnik taorian'ny nanidiana ny varavarany noho ny areti-mandringana COVID-19. Ny herinandro lasa teo dia nanapa-kevitra ny governemanta Kroaty hanokatra ny sisintaniny hatrany amin'ireo teratany folo ao amin'ny fanjakana eropeanina, Repoblika Tseky, Hongria, Austria, Estonia, Latvia, Litoania, Polonina, Slovenia, Alemana ary Slovakia.
Iberostar Group dia manolotra politika vaovao momba ny fiarovana hotely